Posted on Waxaa laga yaabaa 12, 2022 Waxaa laga yaabaa 13, 2022 by Fei (aasaasaha)
2 URALTEXIMPORT LLC
3 Ts Dharka
4 EWT LTD-Warshado Dharka la Isticmaalo oo Jumlo ah oo ku yaal Shanghai
5 TRI - Dib-u-warshadaynta Dharka
6 Warshadaha Dharka La Isticmaalo Jumlada ee Shanghai Gabagabada
Ma waxaad raadinaysaa warshad la isticmaalo oo sumcad leh oo ku taal Shanghai? Halkan waxaa ah shan ka mid ah kuwa ugu fiican, oo ku saleysan khibradeena la shaqeynta iyaga. Warshadahani waxay sumcad fiican ku leeyihiin dharka tayada leh iyo keenista waqtiga ku habboon. Dhammaantood waa muhiim marka aad wax iibsaneyso. La xidhiidh mid ka mid ah warshadahan maanta si aad u bilowdo dalabkaaga xiga!
Hissen waa alaab-qeybiyaha ugu fiican ee la isticmaalo haddi aad ku raadinayso jumlo dhar la isticmaalay oo qiimo jaban ah. Waxay leeyihiin in ka badan 120 qaybood oo dhar ah, oo ay ku jiraan kabo iyo calal. Kooxdoodu waxay ku kala soocaan dharka la isticmaalay miisaan ahaan ama cadad hadba sida loo rabo.
Dharkooda la isticmaalay ayaa ah kuwa tayo sare leh waxaana lagu heli karaa heerar dhaqaale oo gaar ah. Waxaad si sahal ah uga dhex baadh kartaa ururintooda oo waxaad dalban kartaa dhar si waafaqsan shuruudahaaga jumlada.
Guud ahaan, Hissen waa alaab-qeybiyaha ugu fiican ee la isticmaalo haddii aad ku raadineyso dhar gacan labaad oo tayo sare leh qiimo tartan leh.
URALTEXIMPORT waa shirkad ku jirtay warshadaha jumlada dharka labaad ilaa 1995. Waxay xidhiidh la leeyihiin 5 warshadood oo Yurub iyo Ameerika oo dhan ah.
U geynta dharka la isticmaalay si toos ah goobahan macaamiishooda iyagoo raadinaya dhar gacan labaad ah oo tayo sare leh.URALTEXIMPORT waxay bixisaa noocyo kala duwan oo dhar ah sida funaanadaha iyo dharka. Oo waxay bixiyaan qalabyada sida xirmooyinka ragga.
Booqo shabakadooda maanta si aad wax badan uga barato alaabtooda iyo sida ay kaaga caawin karaan inaad kaydiso kharashaadka miisaaniyadaada ganacsiga.
Ts Textiles waa alaab-qeybiye la isticmaalay oo khibrad 40 sano ka badan u leh warshadaha. Waxay ku leeyihiin sumcadda jumloleyda dharka ee la isticmaalay kuwaas oo awood u leh inay bixiyaan dhar gacan labaad oo tayo sare leh.
Dharka jumlada ah ee la isticmaalo waxay noqon kartaa suuq adag in la galo, laakiin iyadoo la kaashanayo Ts Textiles, ganacsatadu waxay ku guuleysan karaan jumlada dharka gacan labaad. Sannadaha shirkadda iyo kooxda khubarada ayaa ka dhigaya alaab-qeybiyaha ugu fiican ee la isticmaalo.
Natiijo ahaan, Ts Textiles waxay noqotay mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha dharka ee hormuudka ka ah warshadaha.
EWT LTD-Warshado Dharka la Isticmaalo oo Jumlo ah oo ku yaal Shanghai
EWT LTD waa alaab-qeybiye la isticmaalo oo leh khibrad 20 sano ka badan warshadaha, oo ku taal Ukraine. Waxay sumcad ku leeyihiin jumlo gacan labaad ah oo bixin kara dhar la isticmaalay oo tayo sare leh.
EWT LTD waa shirkad soo saarta dharka gacan labaadka ah ee laga keeno Ingiriiska oo ka ganacsata adduunka oo dhan. Waxay bixiyaan kala-soocid heer sare ah, iyagoo dammaanad qaadaya in dalabkaaga lagu soo diri doono waqtigii loogu talagalay. Shirkaddu waxay siisaa dharka la isticmaalay ee ragga, dumarka, iyo carruurta da 'kasta leh, oo loo kala soocay qaybo.
EWT LTD waxay leedahay noocyo kala duwan oo badeecooyin la cusboonaysiiyay si loo hubiyo in macaamiishooda ay leeyihiin isbeddellada moodada ugu dambeeyay.
TRI - Dib-u-warshadaynta Dharka
Dib-u-warshadaynta dundu waxay siinaysay macaamiisha adduunka oo dhan dhar la isticmaalay oo tayo sare leh tan iyo markii la aasaasay. Iyada oo in ka badan 15 sano oo waayo-aragnimo ah u leh warshadaha sahayda dharka ee la isticmaalay, DIB U CUSBOONAYSIINTA DHEXDA INTERNATIONAL LTD waa il aad u fiican dharkaaga gacanta labaad. Shirkadoodu waxay bixisaa alaabo tayo sare leh oo leh qiimo tartan iyo waqtiga markabka!
Shirkaddu waxay leedahay koox had iyo jeer diyaar u ah inay kaa caawiso inaad hesho waxa alaabada ugu fiican. Intaa waxa dheer, waxay bixiyaan adeegyo la habeeyey si sax ah iyadoo loo eegayo shuruudaha.
Markaa xor u noqo inaad dib ula xiriirto haddii wax su'aalo ahi soo baxaan inta lagu jiro hawshan.
Warshadaha Dharka La Isticmaalo Jumlada ee Shanghai Gabagabada
Shanghai waa xarun moodo caalami ah waxayna hoy u tahay warshado badan oo dharka jumlo ahaan loo isticmaalo. Haddii aad raadinayso alaab-qeybiye la isku halayn karo oo tayo sare leh oo dib loo warshadeeyay, shantan warshadood waa inay ku jiraan liiska ugu sarreeya. Markaad la xiriirto alaab-qeybiyeyaashan, weydii khibraddooda ku saabsan bixinta tafaariiqda ee gobolkaaga ama waddankaaga. Waxa kale oo laga yaabaa inay hayaan talooyin ku saabsan dhoofinta alaabtaada suuqyo cusub.
Views Views: 53
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta Warshadood ee ugu Sarreysa ee La Isticmaalo Jumlada Dharka ee Shanghai.